विना,शकारी भूकम्पले सत्या*नाश गरेको बारपाकमा संकट,१५ दिनमा १३ जनाको मृ,त्यु -
विना,शकारी भूकम्पले सत्या*नाश गरेको बारपाकमा संकट,१५ दिनमा १३ जनाको मृ,त्यु
१४ जेठ,काठमाडौं। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाक अहिले अर्को संक,टमा छ । गाउँभरि रुघा,खोकी, ज्वरो र पखा,लाका बिरामी छन् । १५ दिनमा १३ जनाको मृ,त्यु भएको छ, जसमध्ये तीन जनाले बुधबार राति मात्र ज्या,न गुमाएका हुन् । मृ,त्यु भएका अधिकांशमा रुघाखोकी र ज्वरो देखिएको स्थानीयले बताएका छन् । करिव १५ शय घरधुरी रहेको बारपाकको अवस्था नाजुक छ, गाउँभरि रुघाखोकी, ज्व,रो र पखालाका बिरामी छन्,’ स्थानीय जीत घलेले भने, ‘कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएपनि परीक्षण हुन सकेको छैन ।’
गाउँमा कोरोना संक्रमण फैलिएको उनीहरुको आशंका छ । निकै थोरै मात्र भएको परीक्षणको नजिताले त्यही देखाउँछ । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख कृष्ण भट्टका अनुसार पीसीआर तथा एन्टिजेन प्रविधिबाट ११३ जनाको परीक्षण गर्दा ६३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ‘यो हेर्दा गाउँमा कोरोना फैलिसक्यो भन्ने हो, तर स्थानीय वासिन्दा परीक्षण गर्न मान्नुहुन्न,’ भट्ट भन्छन् । कोरोना परीक्षणका लागि पटक पटक जाँदा स्थानीयले नमानेको उनको भनाइ छ । २५० जनाको परीक्षण गर्ने सामग्रीसहित जाँदा १८ जनाको मात्र परीक्षण गर्न सकेको भट्टले सुनाए ।
स्थानीयबासीलाई सम्झाउन दुई दिनअघि स्थानीय कर्मचारी खटिएका थिए । बारपाक स्वास्थ्यचौकीसँगै रहेको महिला भवनमा अक्सिजनसहित ५ वेडको आइसोलेसन सेन्टर बनेको छ । भट्ट भन्छन्, ‘बारपाकको जनघनत्व बढी छ, त्यहाँ कोरोना फैलियो भने आउट ब्रेक हुन्छ । तर स्थानीयले चासो देखाउनुहुन्न ।’गाउँभर बिरामी बढेपनि परीक्षण नगर्ने र धार्मिक संस्कारको नाममा मानिसहरु भेला तथा जमघट हुने काम नरोकिँदा थप जोखिम बढेको उनले बताए ।यो समाचार अनलाइन खबरले तयार हो ।
परीक्षण गर्न किन डराउँछन् स्थानीय ? गाउँमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामी छन्, तर परीक्षण गराउन मानेका छैनन् । मौसम परिवर्तनको समयमा रुघाखोकी तथा ज्वरो आउनुलाई स्थानीयले सामान्य रुपमा लिने गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भट्ट बताउँछन् । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा गाउँलेले फरक व्यवहार गर्ने त्रास पनि उनीहरुमा रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘रुघाखोकी लागेको बेला परीक्षण गरियो भने कोरोना देखिन्छ, अनि कोरोना लाग्यो भने गाउँमा बस्न दिँदैनन् । छिमेकीले छिःछिः दुरदुर गर्छन् भन्ने डरले पनि परीक्षण गर्न नमानेको पाइएको छ ।’
स्थानीय जित घले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन् । स्थानीय सरकारबाट पनि पहल नभएको उनको गुनासो छ । अर्का स्थानीय मीन गुरुङ भन्छन्, ‘एकरदुई पटक कोरोना परीक्षण गर्न आउने भनेर आएको थियो, तर खासै परीक्षण भएन । यस्तो बेला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, बिरामी भएकालाई औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर न सरकारले ध्यान दियो न स्थानीय जनप्रतिनिधिले ।’
सहयोग गरिदिन गाउँपालिकाको आग्रह – बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले भने परीक्षणका लागि स्थानीय तयार नहुँदा समस्या भएको बताएको छ । बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै पालिकाले परीक्षणका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिन राजनीतिक दल, स्थानीय संघसंस्था, सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।
प्रदेशबाट १० जना स्वास्थ्यकर्मी बारपाकतर्फ – गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बारपाकमा स्वास्थ्य टोली पठाएको छ । निर्देशक डा। विनोदविन्दु शर्माका अनुसार पोखराबाट ९ जना र गोरखाबाट एक जना गरी १० जनाको टोली बारपाकतर्फ गएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार काम सुरु गर्नेछन् । जसमा दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सक, एक जना मेडिकल अफिसर, एक जना नर्सिङ अफिसर, दुई जना नर्सिङ स्टाफ, एक जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक, दुई जना प्रयोगशालाकर्मीर एक जना मनोसामाजिक परामर्शदाता सहभागी छन् ।
जिल्लाबाट पनि स्वास्थ्यकर्मी जाने – बारपाकमा गोरखाबाट चिकित्सक टोली खटाइने भएको छ । बिहीबार बसेको जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९डीसिसिएमसी० को बैठकले गोरखा अस्पतालका डा। सन्दीप श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन जनाको चिकित्सक टोली खटाउने निर्णय गरिएको हो । शुक्रबार उनीहरु बारपाकतर्फ जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।
Previous ज्या*न मा,र्ने शैलिमा चिकित्सक माथि आक्र*मण,३ जना प,क्राउ
Next अक्सिजनको अभाव ! १ जना सुत्केरी सहित ६ जनाको गयो ज्या,न